Ụlọ ọrụ China na Wool Dryer Ball factory na ndị na-emepụta | Huasheng
A na-eji ajị anụ eji eme akwa Wool na-abụkarị 100% ajị Ọhụrụ. Ha agaghị emepe emepe ma ọ ga - adịgide ruo ọtụtụ afọ. Ha size bụ ezigbo maka kacha akọrọ arụmọrụ. Ha dị mma maka ịkwado ihe nku dị ka quilts na Jaketị. Iji bọọlụ na-ehicha ajị anụ na-azọpụta gị akpụkpọ ahụ site na kemịkalụ ndị a na-eji akwa draya na ihe ndị na-eme ka ọ dị nro, ọ na-azọpụtakwa onye ọkpọ nkụ na nsị n'aka nke ndị a. Ọ bụ usoro akụ na ụba ọzọ iji kpuchie akwa akwa na-egbu egbu na-egbu mmiri na soft softers. A na-akwadoro ha nke ọma maka akwa na uwe ụmụaka, yana maka ndị nwere anụ ahụ.
* Gbalịa ịdị na-esi bọl ọkpọ nkụ site na itinye mmanụ ole na ole dị mkpa (lavender, lemon, wdg) na bọọlụ ọ bụla. Nke a ga-esi uwe gị na-esi ísì ụtọ!
* Belata static n’ihu site n’ịhụ na uwe anaghị ehicha. Gbalịa wepụ uwe n’oge na-adịghị anya karịa ka ị na-eme.
* 3 mkpọ nke Wool Dryer bọọlụ maka obere ibu.
* 6 nke Wool Dryer bọọlụ maka nnukwu ibu.
Kedu ihe kpatara Họrọ bọọlụ ọkpọ nkụ?
Leasehapụ nsachapụ nke Steti na Soften: Ọ na-enyere aka belata njigide efu site na ibelata kọntaktị dị n'agbata uwe ahụ. A ga-eme ka akwa ahụ dị nro ma ọ bụ gbochie wrinkles n'ụzọ dị mma n'ihi mgbatị ahụ belatara.
Lekọta uwe gị na akpụkpọ gị: Organic, eco-lasa, hypoallergenic, enweghị kemịkal ma ọ bụ ihe mgbakwunye na-emerụ ahụ. Great dị mma maka anụ ahụ dị ncha, akwa nhicha ahụ, ndị nkasi obi, uwe, akwa akwa ụmụaka, akwa akwa na uwe anụ ụlọ wdg. Chekwaa Oge Gị na Ike Gị: Egwuregwu bọọlụ a na-anabata ihe na-eme ka ọ na-eme ngwa ngwa, na-eme ka uwe na ngwa ngwa, na-adọta mmiri mmiri. nke ị ga-eji akwa gị rụọ ọrụ. Jiri oge gị rụọ 20% -45%.
Nhọrọ nke Eco-Friendly: N'adịghị ka akwa akwa na-ehicha ihe dị mkpa ka ị tufuo mgbe ọ bụla ejiri ya, ube a na-eji ajị anụ eji eme ihe ga-enyere gị aka ịchekwa ego, belata ihe mkpofu ma debe uwe gị dị nro karịa ka ọ dị na mbụ.
1. Njikọ aka na aka, nwere ike iji ya ugboro ugboro
2. Ọkụ ngwa ngwa, ịchekwa ume
Belata ike eletrik
4. ajị anụ, enweghị kemịkal
Etu esi eji ya?
1. Jiri bọọlụ 3-4 maka obere / ọkara na 5-6 bọọlụ maka nnukwu ibu.
2. Iji jiri ha, tinye ha na igwe nhicha ma hapụ ha ebe ahụ. Dị Mfe!
3. You nwere ike itinye isi na ịsa akwa gị site na itinye ntakịrị tụlee mmanụ dị mkpa na bọọlụ ọ bụla.
4. Enweghị mkpa ihichaa bọọlụ na-ehicha ajị anụ ha dị ka ha bụ naanị na draịva nwere uwe dị ọcha
5. Ka osi dị, ọ bụrụ na ọ dị ha mkpa kpochara nanị ebe na-asacha na mmiri na-akọrọ na akọrọ.
Nke gara aga: Felt pouch (obi enyo enyo enyo)
Osote: Wool frized